Momba ny pejy
Pejy malagasy mandinika sy mandalina ny zava-misy sy mitranga rehetra maneran-tany.
Ity pejy ity dia tahaka ny efa ambaran'ny anarany,pejy malagasy iray mirediredy fotsiny.
Anisan’ny fomba hafa iray mampiavaka an’ny i Madagasikara eo anatrehan’izao tontolo izao ny resaka famadihana.Marihinaa moa fa ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny mampiavaka azy manokana avokoa,fa ny any Madagasikara manokana dia hafa-kely amin’ny firenen-drehetra dia ilay “mamoha ny efa maty”. Laniana ny vola aman-karena kely izay ananana, eny na hatramin’ny fananana iz [...]
Rediredy nalefan'i: Rediredy Ny: 05-11-2021 Sokajy: Fiaraha-monina
Irery tokoa ve isika?
Mbola miodina ny tany,ary mbola mibaliaka ihany koa ny masoandro, mitaratra manome hazavana sy hafanana ireo zavaboahary rehetra mialoka eo aminy.Ny lanitra dia mbola tsy mitrahatra manome fahafinaretana ara-jery ho an’ny tsirairay avy izay mbola velona ka afaka mandinika sy mijery ny zavatra rehetra misy eo aminy, eny na dia ireo zavatra takatra amin’ny maso miboridana fotsiny aza. [...]
Rediredy nalefan'i: Rediredy Ny: 27-01-2021 Sokajy: Fisainana
Finoana sy fivavahana
Malagasy Ariary Converter
vaovao mpanjaka malagasy
Monmba ny pejy
Ny pejy rediredy.info dia pejy malagasy iray tsy miankina,Nohezahana ho amin'ny teny malagasy iray manontolo. Pejy iray miezaka mandalina sy mijery amin'ny fomba fijery hafa ireo trangan-javatra manerana izao tontolo izao na ivelany izany.
ⓒ2021 rediredy.info / Concept&design: Jean Baptiste Razafimamonjy / rediredy.info